Dib-u-dhajinta Boorsooyinka leh Rinjiga ama Plasti-Kote
Taariikhda & Dhaqanka
Tirooyinka Muhiimka ah
Shirkado caan ah
Macnaha magaca iyo macnaha ereyada
Muuqaal Weyn & Dhacdooyin
Ereyada Shuruudaha Muhiimka ah
Diinta & Ruuxnimada
Asalka & Horumarka
Caqiidada & Agnosticism
Mashaariicda & Tijaabooyinka
Miisaanka Wajiga ah
Goolasha qaaska ah
Istaraatijiyadaha & Waxbarashada
Hawlgalku wuxuu ku yaal Espanol
Baabuurta & Mootooyinka Dayactirka & Dayactirka
Sida Loo Diido Gawaarida Gaadiidka ama Gawaarida Gawaarida
Waqtiga Fikradda ah: Miyaad Raacdaa ama Bedeshaa Gaarigaaga?
Dib-u-hagaajinta giraangirta waxay saameyn weyn ku yeelataa. Sawirka Matt Wright, 2014
Jikada baabuurka waa sida kabo dadka. Waxay badanaa yihiin waxyaabo aad marka hore ogaatid, iyo markaad ogeysiisid, waxay wax badan ka sheegaan qofka xiran. Qaar ka mid ah dadku way soo iibsadaan maxaa yeelay waxay noqon doonaan kuwo raaxo leh oo si fiican u qabta. Ama ugu yaraan taas waa waxa ay kuu sheegaan marka ay ku qaataan lacag aad u badan oo lacag ah kabaha, ama giraangirro. Xaqiiqadu waa iibsashada gawaarida badankood waxay ku saleysan tahay sheyga. Haddii aad ka fekereysid inaad iibsato gawaarida cusub ee gaarigaaga ama gaariga laakiin aadan hubin inaad diyaar u tahay inaad ka tagto mashruuca lacagta caddaanka ah ee mashruuca, waxaad tixgelin kartaa inaad dib u dhigno wheels aad haysato. Badbaadi weyn!
Waxaa jira faa'iidooyin xaqiiqo ah oo dib u farsameynaya taayirradaada. Marka hore, maaddaama ay durbadiiba ku jiraan baabuurka iyo isticmaalkooda, waxaad ogtahay inaysan jiri doonin wax la yaab leh oo la xidhiidha dhejinta ama baabuurteynta. Ma jirto wax ka xun marka laga eego gaarigaaga oo ku fadhiya gawaarida quruxda badan oo kaliya si aad u ogaato waxaa jira arin cad ama wax kale oo kugu haynaya inaad ku raaxaysatid raacista. Marka labaad, haddii aad foorjirisid wheels aad horey u isticmaashay, waxaad xaqiiqda ku haysan kartaa taayirradaada. Badanaa weelasha cusub waxaad u baahan doontaa taayirro balaadhan oo kala duwan. Ama dareenka caanka ah wuxuu kuu sheegi doonaa haddii aad bixinayso in ay leedahay taayirro lagu rakibo oo isku dheelitiran waxay noqon kartaa wakhti fiican oo lagu beddelo taayirrada, xitaa haddii ay ku nool yihiin nolol iyaga ka mid ah.
Diyaar ma u tahay inaad rinjiyeyntaada ku sawirto? Nidaamku waa isku mid haddii aad rabto in aad isticmaasho rinji shahaadada xirfadeed ama aad rabto in aad tagto xal kale oo ku meel gaar ah sida Plasti-Kote.
Diyaarinta Boorsooyinkaaga Rinjiga
Muraayaddu waxay ahayd maskeed, diyaarisay oo lagu rinjiyeeyay rinji tayada qalabka taararka. Sawirka Matt Wright, 2014
Talaabada koowaad waa in aad gawaaridaada si aad ah u nadiifiso. Haddii aad sawir ka bixineyso dibadda gawaarida, waxaad ka bixi kartaa iyaga oo ka tagaya iyaga lagu rakibay gaariga iyada oo loo marayo nidaamka oo dhan. Muraayadahaaga waxay si aad ah u isticmaalaan isticmaalka. Grime road, dufan, rinjiga , dhirta - dhammaan waxyaabahani waxay ku dabooli karaan giraangirtaada. Waxaad u baahan doontaa inaad marka hore ku nadiifiso saabuun iyo biyo, ka dibna mar kale wax la hubo in la gooyo gogosha sida macdanta macdanta.
Markaad haysato wheels nadiif ah waxaad u baahan tahay inaad diyaariso dusha sare si aad uhesho ranjiga. Haddii wax ay tahay mid aad u sahlan oo u iftiin leh, rinjiga si fiican uma dhicin. Waxaad heli doontaa shaqo rinjiga oo weyn oo bilaabma inuu kala gooyo dhowr toddobaad ama bilo. Maya mahadsanid! Dhabarka dhalaalaya wuxuu u baahan yahay in laga saaro ama ugu yaraan qallafsan ka hor inta aadan dib u soo qaadin wheels. Habka ugu fudud ee loo samayn karo waa isticmaalka dhogor birta . Suufka Birtu wuxuu kuu ogolaanayaa inaad jebiso dusha sare ee rinjiga hore iyada oo aan halis aheyn in lagu daro xayawaan qoto dheer ama qaboojiyayaal ah oo muujinaya shaqadaada rinjiga cusub. Isku dhaji aagga oo dhan oo aad qorsheyneyso inaad rinjiyeeyso. Markaad sameyso, nadiifi marinnada markale.
Maaskaga iyo Rinjiyeynta Gawaaridaada
Qalabka lugta ah ee lugta leh ayaa dabooli doona godadkaaga lugtaada oo aad nadiifiso inta lagu jiro rinjiga. Sawirka Matt Wright, 2014
Iyada oo wax walba diyaar u ah inaad tagto, waxaad u baahan doontaa inaad ka ilaaliso taayiradaada rinjiga duulimaadka. Isticmaal cajalad maskraac ah si aad u daboosho taayirka oo dhan. U hubso in aad u hesho meel u dhow ama hoosta ka soo duubaysa dusha birta si aanad u helin wax ku buufin taayirradaada. Iyada oo cajalad fiiqan, strips yar - 6 inji ama wax ka yar - midba midka kale oo isku dhafan ayaa u muuqda inuu si fiican u shaqeynayo.
TALO: Marnaba ma doonaysid in aad rinjiyeysid aagga meesha lowska lugta la xariirto wheel (oo loo yaqaan kursiga). Si aad uhesho rinjiga, fadhi farta fiiqan ee kursiga markaad rinjiyeeyso.
Waxaad diyaar u tahay in aad dhab ahaantii ku rido ranjiga on wheels! Trick to painting waa in lagu buufiyo jajabyo badan oo badan oo iftiin badan halkii lagu qulquli lahaa. Waxaad ogaan doontaa inaad adigu aad u isticmaalayso xaddiga saxda ah ee saxda ah sababtoo ah waxay u egtahay sidii ay u socoto si haboon, ma ahan tobly ama glicpy. Tijaabi xawaaraha istarooggaaga si loo xakameeyo inta rinjiga uu socdo. Ugu yaraan seddex jaakad saar jeebkaaga si aad u hubsatid in aad hesho dhamaystir dhammaystiran. Marka ay qalalayaan, jiid kaarka iyo ku raaxee!
Sidee loo hagaajiyaa isdhexgalka Shimmy
Baabuurta & Mootooyinka
Dhibaatooyinka Jeep Grand Cherokee Dhibaatooyinka
Qiyaasta Kharashka ee 5 Fudud oo Fudud (Automobile Repairs)
Sida loo bilaabiayo baabuur la soo dhajiyay
Hubinta iyo buuxintaada dejiyahaaga
Sida Loo Raaco Rinjiga Rinjiga Laga Yeelo Baabuurkaaga
Muuqaalka Birta Intro: Hammer iyo Dolly
Dhaawaca Dhamaadka Dhimashada: Isku Diiwaani?
Sidee Qalabkaygu u shaqeynayaa?
Qaybta Sawirka Wareegga iyo Wareegga Midabka
Sidee loo bedelaa wadajir ballaaran
Sida Loo Isticmaali Karo Dentigaaga Gaadiidka
Maxay Khamrigu u gubi karaa Gool ama Boog?
Waa maxay "Juno" oo ku saabsan Dhalinta, Dhalashada iyo Doorashada
Nathanael - reer binu Israa'iil oo run ah
Top Gandhi Quotes
Maxay ahayd Dabagalka Dib-u-habaynta?
20 Kitaabka Quduuska ah ee Ilaah
5 Journals Wenealogy Waa inaad aqriso
Casharrada Luqadda Talyaaniga: Heerarka Talyaaniga Per, Su, Con, Fra / Tra
'Aller,' 'Devoir,' 'Faire' iyo Farsamooyin kale oo Faransiis ah
Harold - Hab Dhismeedka Horudhaca Habaynta
Sidee loo Codsadaa Sharciga Naqshadeynta
Meelo badan oo madow: Dhaqdhaqaaqa Galactic
Sababta iyo Sida Loo Beddelo Xididka Caanaha
Habka ugu fudud ee la xasuusto Yaa la mid ah
Fasaxyada A & M (FAMU) ee Florida
Helitaanka Rabitaanada Ruuxyada aan la Lahayn
Stonehill College GPA, SAT iyo ACT Data
The ugu dambeeyay on Gabby Douglas 'Comeback
Shirka Lone Star
RISD, Dugsiga Rhode Island ee GPA, Macluumaadka SAT iyo ACT
Taraafiga Abaalmarinta (1828)
Kulliyadaha ugu sareeya ee Khatarta Shaqaalaha
Xafiiska PBA Hall of Fame
10 Waxyaabaha Aad Baahan Tahay Inaad Ogaato Tababarka IT
© 2022 so.eferrit.com